तपाईंले कमाएको पैसा सबै खर्च गर्नुहुन्छ ? जोगाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/तपाईंले कमाएको पैसा सबै खर्च गर्नुहुन्छ ? जोगाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
तपाईंले कमाएको पैसा सबै खर्च गर्नुहुन्छ ? जोगाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
त’पाईंले कमाएको पै’सा सबै खर्च ग’र्नुहुन्छ ? केहीले धेरै प्रयासबाट आफू’ले कमाएको पै’सा जोगाउन सक्छन् । तर केही व्य’क्ति भने पैसा जोगाउन नसकेर हैरान नै भएका छन् । आज हामीले पैसा कसरी बचाउने भन्ने विषयमा च’र्चा गर्छौ । जुन कुराले तपाईंलाई स’हयोग गरोस् । पैसा बचाउने कुरा पनि एक प्रकारको कला हो । धेरै व्यक्तिले आफूले पैसा बचाउन नसकेको भन्दै गुनासो गर्छन् । पैसा बचाउन नसक्ने समस्या भएमा कुनै पनि योजनामा सफल हुन समस्या हुन्छ । तपाईंको पनि कमाएको सबै पैसा खर्च गर्ने वा बचत नगर्ने समस्या छ भने विभिन्न उपायको अवलम्वन गर्न सक्नु हुन्छ ।
खर्चको सूची बनाउनुस्: तपाईंले ससानोदेखि ठूलोसम्म खर्च गर्ने शीर्षक बनाउनुस् । यसले तपाईको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्छ । ठूलो खर्चहरु घर बनाउन, कार खरिद गर्न, बालबालिकाको पढाइलगायतका शीर्षक जब तपाईंले लेख्नुहुन्छ तब खर्च कटौती सुरु हुन्छ ।
कार्डको प्रयोग कम गर्नुस्: क्रेडिट कार्ड वा एटिएम कार्डको माध्यमबाट पैसा खर्च गर्न रोक्नुपर्छ । सबै प्रकारका खर्च गर्ने कार्डबाट थाल्नु भएको छ भने त्यो कुरा नियन्त्रण गर्नुस् । एक महिनामा आफूले बनाएको योजनाअनुसार खर्च गर्नुस् अर्को महिना स्वत तपाईं बचत तर्फ उन्मुख हुन थाल्नु हुन्छ ।
कर्जा नराख्नुस्: आफूले कुनै पनि प्रकारको कर्जा लिने र दिने काम नगर्नुस् । तपाईंले कसैसँग कर्जा लिनु भएको छ भने त्यो तत्काल भुक्तान गर्नुस् र आफूले दिएको कर्जा पनि माग्न थाल्नुस् । ठूलो काम गर्नु पहिले कर्जा भुक्तान गरेरमात्र खर्चगर्न थाल्नु भयो भने तपाईंलाई समस्या पर्दैन ।
आपतकालिन कोष बनाउनुस्: बचतका लागि तपाईंले आपतकालिन कोष बनाएर योजना बनाउन पनि सक्नु हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो कोष आवश्यक पर्छ जब तपाईंसँग अन्तिम विकल्प होस् । यस्तो कोषले तपाईंलाई अन्तिम अवस्थामा साथ दिन्छ । पैसा बचाउनका लागि योजनाअनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनुस् । खर्च कसरी र किन गर्ने भन्ने कुराको एक पटक समिक्षा गर्नुभयो भने पनि धेरै खर्च कटौती हुन्छ ।
उत्त’र सि’रान पारेर यसकारण सुत्न हु’दैन ! शास्त्रहरूमा जीवनका सबै जरुरी कामका लागि खास कुराहरू बताइएका छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राख्दा स्वास्थ्य लाभका साथसाथै सुख समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ । सुत्नु दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण अंग हो । सुत्दाखेरी लापरवाही गरेमा स्वा’स्थ्यलाई प्रतिकूल अ’सर पर्छ । कुन दिशामा शिर अनि कुन दिशामा गोडा पारेर सुत्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यसरी सुत्दा धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् । वातावरणमा चुम्बकीय शक्ति रहेको हुन्छ र यो शक्ति दक्षिणबाट उत्तरतिर गइरहेको हुन्छ ।
हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ । यसरी ऊर्जाको यात्राक्रममा भोजन पनि मजाले पच्छ । यसरी सुतेर बिहानीपख उठ्दा हाम्रो दि’माग शान्त हुन्छ र हामी ताजापन महसुस गर्छौं । यसको ठीक उल्टो दक्षिण दिशामा गोडा पारेर सुत्दा चुम्बकीय ऊर्जा गोडाबाट छिरेर शिरतिर पुग्छ । त्यो चुम्बकीय ऊर्जाले तपाईंको मस्तिष्कमा अनावश्यक दबाब दिन्छ किनकि शरीरका विभिन्न अंगलाई छुँदै छिरेको ऊर्जालाई म’स्किष्कले सोस्छ र भारी बढाउँछ । त्यो अवस्थामा तपाईं ५ देखि ६ घन्टा रहनुभयो भने दिमागलाई लगातार दबाब परिरहन्छ र रो’गहरू लाग्न थाल्छ । दक्षिण दिशातर्फ शिर पारेर सुत्न सकिएन भने पूर्व दिशामा शिर अनि पश्चिम दिशामा गोडा पारेर सुत्नु राम्रो हुन्छ । सूर्य पूर्व दिशाबाट उदाउँछ र बिहान पूर्व दिशातर्फ शिर हुँदा सूर्य भगवानको सम्मान हुन्छ । पश्चिममा टाउको पारेर सुत्दा एकाबिहानै सूर्यलाई गोडा देखाएर अपमान गरेको ठहर्छ ।
दक्षिणतर्फ किन सिरानी बनाएर सुतिन्छ ? दक्षिण दिशामा किन सिरानी बनाउनुपर्छ ? यसको धार्मिक महत्व के छ ? वैज्ञानिक रहस्य के छ ? किन उत्तरतर्फ सिरानी बनाउनु हुँदैन ? उत्तर वा पश्चिमतर्फ सिरानी बनाए के हुन्छ ? अहिले हामीलाई यस्ता कुरा बेकारको लाग्नसक्छ । अर्थात अर्थहिन लाग्नसक्छ । यद्यपी हाम्रा पिता-पूर्खाले भन्दै र गर्दै आए, ओछ्यान बनाउँदा दक्षिण दिशातर्फ सिरानी बनाउनुपर्छ । दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व जता बनाएपनि के हुन्छ ? हामीलाई मतलब भएन । किनभने हामीलाई लाग्यो यि कुरा अन्धविश्वास हुन् । पुरातन धारणा हुन् । यस्तै मानसिकता बोकेर हामीले सुत्नका लागि कसरी र कस्तो अवस्था अपनाउने भन्ने कुराको पालना गरेनौं । यद्यपी अझैपनि बुढापाका भन्छन्, दक्षिणतर्फ सिरानी बनाउनुपर्छ ।
के छ त वैज्ञानिक अर्थ ? खासगरी पृथ्वीमा चुम्बकिय तत्व हुन्छ । यसमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ लगातार चुम्बकिय तरंग प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । जब हामी दक्षिणतर्फ सिर अर्थात टाउको राखेर सुत्छौं, तब यी उर्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ । र खुट्टाबाट निस्किएर बाहिर जान्छ । यही कारण विहान उठ्दा मान्छेले ताजगी महसुष गर्छन् । तर, यदि उत्तरतर्फ टाउको र्फकएर सुत्छौ, तब ठिक विपरित ढंगले हाम्रो शरीरमा चुम्बकिय तरंग प्रवाह हुन्छ । जस्तो कि खुट्टाबाट प्रवेश गरेर सिरबाट निस्कन्छ । यसको साइड इफेक्ट भनेको हामीलाई मा’नसिक समस्या हुन्छ । अल्जाइमर वा मस्तिष्कसम्बन्धी समस्या हुन्छ । उच्च र’क्तचापमा पनि यसको कारण मानिएको छ । त्यसैले दक्षिणतर्फ टाउको फर्काएर वा सिरानी बनाएर सुत्नुपर्छ ।
सिरानी कता बनाउने भन्ने कुरा पृथ्वीको चुम्बकिय अवस्थितीलाई आधार मानेर तय गरिएको हो । कुन दिशातर्फ सिरानी बनाउँदा सही हुन्छ र कुन दिशा गलत हुन्छ भन्ने कुरा यसैले निर्धाण गर्छ । त्यसो त पूर्वी दिसामा पनि सिरानी बनाएर सुत्न सकिन्छ । यसले पनि स्वा’स्थ्य एवं मानसिकतामा राम्रो प्रभाव पार्ने बताइन्छ । यद्यपी सूर्योदय हुने स्थानमा खुट्टा पारेर सुत्नु हुँदैन । अर्थात पश्चिमतर्फ सिरानी राख्नु राम्रो होइन ।
शरीर विज्ञानको कुरा: हाम्रो मु’टु शरीरको तल्लो आधा भागमा छैन, त्यो तीन-चौथार्ए माथिल्लो भागमा छ । किनभने मुटुले रक्त प्रवाह गराउँदा शरीरको तल्लो भागभन्दा माथिल्लो भागमा बढी गाह्रो हनेगर्छ, गुरुत्वाकर्षणको कारण । त्यसैले मु’टुभन्दा तलको भागमा रक्त प्रवाह हुने धमनीभन्दा मु’टुबाट माथि र’क्त प्रवाह गर्ने धमनी बढी परिष्कृत हुन्छ । माथिल्लो भागमा रगत प्रवाह गराउँदा त्यो अत्यान्तै सानो सिरामा हुन्छ, अर्थात कपालको रौं बराबर । यदि त्यसमा अतिरिक्त र’गतको बूँद थपियो भने, त्यो फुटेर र’क्तश्राव हुनसक्छ ।
धेरैजसो मान्छेको म’स्ष्तिकमा र’क्तश्राव हुन्छ । यसले खासै ठूलो हानी गरिरहेको हुँदैन, तर सामान्य असर भने गरिरहेकै हुन्छ । ३५ बर्षपछि मान्छेको स्मरणशक्ति वा ग्रहण गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुमा पनि यस्तै कारण हुन्छ । जब हाम्रो शरीरमा र’गतसँग जोडिएको कुनै समस्या हुन्छ, जस्तो कि एनीमिया वा र’क्तअल्पता, तब चिकित्सकले आयरन अर्थात फलाम सेवन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । हामीले पृथ्वीको चुम्बकिय क्षेत्र अर्थात म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा सुनेकै छौ । पृथ्वीमा चुम्बकिय शक्ति शक्तिशाली हुन्छन् ।
यदि हामी सुत्दा उत्तर दिशातर्फ टाउको बनाएर सुत्यौ भने वा लगातार यस्तै अवस्थामा ६-७ घण्टा बितायौ भने, चुम्बकिय आकर्षणको दबाव हाम्रो दिमागमा पर्छ । यसले टाउकोको र’क्तप्रवाहमा पनि पुरै प्रभाव पार्छ । चुम्बकिय आकर्षणको कारण टाउकोमा बढी र’क्तश्राव हुन्छ, त्यही कारण तपाई उत्तेजित भएर उठ्नुहुनेछ । अर्थात तपाईंको निद्रा विचमै टुट्नेछ। यस किसिमको प्रभाव कति र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहि तपाईंको स्वास्थ्यमा पनि निर्भर गर्छ । यदि रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने यसको असर तपाईंले अरु बढी झेल्नुपर्छ ।
सुताई सम्बन्धी केही कुरा: अहिले धेरै अनिद्राको समस्या झेलिरहेका छन् । धेरैको निद्रा खल्बलिएको छ । यसो हुनुमा हाम्रो खराब जीवनशैली, दिनचर्या, खानपान, चिन्तन मूल कारण हो । यदि हामीले हाम्रा पिता पूर्खाले अभ्यास गर्दै आएका तौर तरिकालाई पालना गरेको भए यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो ।
– जब तपाईं उठ्नुहुन्छ, दायाँतर्फ घुम्नुहोस् र विछ्यौनाबाट बाहिर आउनुहोस् । किनभने निद्राबाट उठ्नसाथ मेटाबोलिक प्रक्रिया एकदम धीमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अचानक ओछ्यान छाड्दा मु’टुमा दबाव पर्छ । – उठ्नसाथ हात दुबै हात रगड्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईंको सबै नाडी सक्रिय हुन्छ । – उठ्नसाथ मन्द मुस्कुराउने अभ्यास गरौं । किनभने हरेक बिहान हाम्रो निम्ति नयाँ जीवन हो
बेल्कुल भाइरल भेलु बाजे : टेलिफिल्मदेखि गायनसम्म
स्कुल जान्छु भनी हिडेको छोरो बाटै बाट ह राए,श्रीमानको समेत अत्तो पत्तो छैन (भिडियो हेर्नुस्)
माछालाई दाना दिन निस्केका चौधरीको शव पोखरीमा भेटियो